TSMC iri kuita mari zhinji yekutenda Apple | ndinobva ku mac
Rwizi rwakadzurwa, kufuma kwevaredzi. Ndiwo motto inofanira kunge iri pamadziro pamuzinda wemugadziri. TSMC. Nerwizi rwese rwuri kupfakanyika pasi rose kubva mukushaikwa kwemachipisi, vamwe vabati vehove vakuru, vakaita seTSMC, vave kuita goridhe.
Uyu mugadziri wema processor akakosha se Apple A uye M series, ichangobva kubudisa dzimwe nhamba dzekutengesa kwegore rapera, uye chokwadi ndechokuti nhamba dzinoratidza purofiti inoshamisa. Ini ndinofungidzira vatungamiriri veApple vachange vagamuchira batch yakanaka yeKisimusi kubva kuTaiwan….
Mugadziri anozivikanwa wema processors TSMC yakaburitsa mamwe manhamba eakaunzi egore rezvemari ra2020 uye chokwadi ndechekuti anoshamisa, tichifunga nezvedambudziko ratiri kutambura pasirese nekuda kwekushaikwa kwechipisi nema processor.
Iyo kambani yakataura kuti yave nekukura kwemari 24,1% muna 2021 zvichienzaniswa negore rapfuura. Uye ramba uchifunga kuti chikamu chimwe muzvina chemari iyoyo chakagadzirwa neApple. Munguva pfupi, idzi pasina mubvunzo nhau huru, asi dzine njodzi munguva yepakati uye kwenguva refu. 25% yekuchinja kweTSMC inotakurwa nemutengi mumwechete: Apple.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., kunze kwekutaura mari yakadai, yakaburitsawo kuti yakanyoresa kuwedzera kwemari. 16,4% muchikamu chechina chegore rapfuura. Nenhamba idzi, kambani yakasimudza fungidziro yekukura kwemari, izvo zvave kuisa pakati pegumi neshanu ne15 muzana.
TSMC yakatotanga bvunzo dzekutanga kugadzira ruzhinji kutsva 3nm processors, chimwe chinhu icho Apple chiri kumirira semvura muna May nokuda kwePhones, iPads uye Macs ye 2023. Pasina mubvunzo, basa rakanaka iro TSMC rave richiita mumakore aya eApple ikozvino iri kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » TSMC iri kumisikidza kutenda kuApple
Mactracker inogadziridzwa ichiwedzera iyo itsva MacBook Pro uye kugadzirisa